कहाँबाट सुरु भयो १ अप्रिलका दिन मूर्ख बनाउने चलन, के हो अप्रिल फूलको इतिहास ? - हाम्रो देश
कहाँबाट सुरु भयो १ अप्रिलका दिन मूर्ख बनाउने चलन, के हो अप्रिल फूलको इतिहास ?
काठमाडौं। आज अप्रिल १ । आजको दिन अरुलाई मूर्ख बनाएर अफ्रि फूल दिवस मनाइन्छ । खासमा यो नेपालको संस्कृति होइन । पश्चिमा देशबाट विकसित भएको यो चलन अहिले नेपालमा पनि व्यापक छ । अप्रिल फूललाई लिएर कैयौं किंवदन्तीहरु प्रचलित छन् । इतिहास हेर्दा १ अप्रिलका दिन कैयौं रोचक घटनाहरु भएका छन् जसका कारण यो दिनलाई अप्रिल फूलको रुपमा मनाउन थालियो ।
केही रिपोर्टमा अप्रिल फूल मनाउने चलन फ्रान्समा १५८५ मा सुरु भएको बताइन्छ । पापे चार्ल्स नवौंले पुरानो क्यालेन्डरको स्थानमा नयाँ रोमन क्यालेन्डरको प्रचलन सुरु गरेपछि पनि केही मानिसहरुले भने पुरानो क्यालेन्डरअनुसार नै नयाँ वर्ष मनाए र उनहिरुलाई अप्रिल फूल भनियो । यद्यपि मूर्ख दिवसलाई लिएर कैयौं अन्य कहानीहरु पनि प्रचलित छन् ।
केही रिपोर्टमा अप्रिल फूल १३९२ मा सुरु भएको बताइएको छ । तर यसको पनि कुनै स्पष्ट प्रमाण छैन । केही रिपोर्टमा १५०८ मा एक फ्रेन्च कविले एक प्वाइजन डि एभरिल को सन्दर्भ दिएका थिए । १५३९ मा फ्लेमिश कवि डे डेनेले एक धनी व्यक्तिको बारेमा लेखे जसले १ अप्रिलका दिन आफ्ना सेवकहरुलाई मूर्खतापूर्ण कार्य गर्नको लागि पठाएका थिए ।
१९ औं शताब्दीमा भारतमा मूर्ख दिवस मनाउने प्रचलन बढेपछि त्यहीँबाट यो संस्कृति नेपाल भित्रिएको मानिन्छ । यो दिवस मनाउने चलन पनि विभिन्न ठाउामा फरक छ । फ्रान्स, इटली, बेल्जियममा कागजको माछा बनाएर मानिसहरुको पछाडि टाँसिन्छ । इरानमा फरसी नववर्षको १३ औं दिन एक अर्काको मजाक उडाइन्छ । यो दिन १ वा २ अप्रिलमा पर्छ । डेनमार्कमा १ मेका दिन मूर्ख दिवस मनाइन्छ । स्पेनिश भाषा बोल्ने देशमा २८ डिसेम्बरका दिन अप्रिल फूल मनाइन्छ जसलाई डे अफ होली इनोसेन्ट्स भनिन्छ ।